People protest in Mandalay, Myanmar in this picture obtained from social media dated May 16, 2021. PHOTO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
ပြည်သွေးနိုင် အပတ်စဉ် တင်ဆက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သတင်း အချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့် ဆိတ်သုဉ်းနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သုံးသပ်ဆွေးနွေးထားပြီး မအင်ကြင်းနိုင်က ကူညီတင်ဆက်ထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ သတင်းရယူနိုင်ဖို့ပိုခက်ခဲလာသလို သတင်းသမားတွေအတွက် အန္တရာယ်လည်း ပိုများလာတယ်ဆိုတာကတော့အထူးပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာသမား ၁၂၀ ကျော် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ်လို့ အခုအချိန်ထိ သတင်းမီဒီယာသမား ၄၀ ခန့် ကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားဆဲပါ။ ဒါကိုကြည့်ရင် သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက် ဘယ်လောက်ခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သတင်းသမားတွေ၊ သတင်းဌာနတွေ ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ စစ်တပ်က အာဏာမသိမ်းခင်အထိ မီဒီယာကောင်စီမှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဦးမြင့်ကျော်က အခုလို ပြောပါတယ်။
" ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ နံပါတ်(၁) အခက်အခဲက ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပေါ့။ သတင်းထောက်အလုပ်က အဖမ်းခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားက အားလုံးအတွက် ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမှာ သတင်းထောက်အလုပ်ကို ဆက်လုပ်မလား၊ စွန့်လွှတ်မလားပေါ့။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ သတင်းထောက်တိုင်းကို မေးတယ်။ တချို့လည်း သတင်းထောက်အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်။ တချို့လည်း ဆက်လုပ်ကြတယ်။ အဲလို ဆက်လုပ်ကြရင် ဘယ်မှာလုပ်တယ်ဆိုတာအသိခံလို့ မရဘူး။ ကိုယ်မေးရမယ့် သတင်း Source တွေက ကိုယ်ဘယ်ဌာနမှာ၊ ဘယ်သတင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ သိသွားရင် အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သတင်း Source တွေကို ရွေးချယ်ပြီး မေးရတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်နေလို့လည်း မရဘူး။ တခြားမှာ ပုန်းရှောင်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ သတင်းအလုပ် လုပ်နေတဲ့သူတိုင်း လစာရကြတာ မဟုတ်ဘူး။ သတင်းဌာနတွေ ဝင်ငွေ မရှိကြတော့ဘူး။ အချို့သတင်းဌာနတွေ၊အွန်လိုင်းသတင်းဌာနတွေဟာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်နေကြရတဲ့သူတွေ အများကြီး။အန္တရာယ်ရှိတယ်။ လစာလည်းမရဘူးဆိုတဲ့ အခက်အခဲ ရှိတယ်။"
ဟုတ်ပါတယ်။ သတင်းသမားအများစုဟာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရကြတဲ့အပြင် ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ လည်း ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ ဒါ့အပြင် သတင်းဌာနတွေဟာလည်း တရားဝင်ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာသလို ဝင်ငွေအရလည်း
ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ပြီး အမှီအခိုကင်းတဲ့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ သတင်းသမားတွေဟာ အခြေအနေမှန်၊ သတင်းအမှန်တွေ တင်ပြနိုင်ဖို့အတွက် မြေအောက်တစ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေကြရတာပါ။ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ Citizen Journalist (CJ)လို့ ခေါ်တဲ
နိုင်ငံသားသတင်းထောက်တွေကြောင့်သာ ပြည်သူလူထုထံကို သတင်းတွေအဆက်မပြတ်
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ သတင်းရယူပိုင်ခွင့် Rights of Access to Information အကြောင်းကိုအနည်းငယ် တင်ပြလိုပါတယ်။ Right to Information (RTI)လို့လည်းသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက် ရရှိပိုင်ခွင့်ဆိုတာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ဌာနဆိုင်ရာတွေက ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်များ(ဥပဒေအရ ခြွင်းချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်များမှအပ) ကို အများပြည်သူက တောင်းခံရယူပိုင်ခွင့်၊သိရှိပိုင်ခွင့်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာတော့ သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့်ကို သီးခြားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွ င်းပြဋ္ဌာန်း ပြီးတော့သော် လည်းကောင်း အာမခံချက်ပေးထားလေ့
ရှိပါတယ်။ သတင်းရယူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၅၀)ကတည်းက ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာ စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ နိုင်ငံပေါင်း (၁၁၀)ကျော်မှာ သတင်းရယူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းထားကြပါပြီ။
သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဟာ အရေးကြီးသလား။ သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ဘာလို့ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ RTI Law ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပိုမိုရှိလာပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်သလို၊ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိရှိလာတာကြောင့် အစိုးရရဲ့
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ မူဝါဒရေးရာတွေမှာ ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေလည်း လျော့နည်းလာနိုင်ပြီးတော့ အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ RTI Law မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ RTI Law ပေါ်ပေါက်ဖို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မူကြမ်း(Draft)အဆင့်သာရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့အဆင့်အထိတော့ မရောက်ရှိခဲ့ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ RTI Law မရှိသေးတဲ့အပြင် အလွန်ပြင်းထန်တင်းကျပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ(Burma Official Secret Act )ကို ကျင့်သုံးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊အိန္ဒိယအက်ဥပဒေအမှတ် ၁၉ လို့ လည်းခေါ်ပါတယ်။၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၈ နှစ်က ဗြတိသျှကိုလိုနီဘဝက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေပါ။ ဒီဥပဒေနဲ့အတော်ဆင်တူတဲ့ဥပဒေကိုဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ သြစတေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှားနဲ့ စင်ကာပူတို့မှာလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာလောက် ပြင်းထန်တင်းကျပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သြစတေးလျနဲ့ စင်ကာပူတို့မှာ မူလဥပဒေကို အတော်လေး ပြင်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နီးချင်း အန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလတွေမှာ RTI Lawပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ၁၉၂၃ ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယအက်ဥပဒေအမှတ် ၁၉ ကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်ဟာ သူလျှို(Spy)တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ရည်ရွယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သတင်းသမားတွေကိုတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာ သုံးစွဲသလို၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားသုံးစွဲနေတာမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က ကျူးလွန်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ အင်းဒင်ရွာလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ သတင်းထောက် ကိုဝလုံး နဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပါပဲ၊ အခုလောလောဆယ်မှာလည်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့စီးပွါးရေးအကြံပေး သြစတေးလျနိုင်ငံသားရှောင်တာနယ် တို့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ ဒီလို ၁၉၂၃ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ခေတ်မမီတော့တဲ့ ပြင်းထန် တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေတွေဟာ Freedom of Expression လို့ခေါ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့သတင်းအချက်အလက်ရယူပိုင်ခွင့် RTI ဥပဒေတွေကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေတွေရှိပေမဲ့
ပြင်းထန် တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ အနေအထား မရှိပါဘူး။အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာတဲ့၊ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ သတင်းရယူပိုင်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့်တွေကို အလေးထားကြပေမဲ့ အာဏာရှင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ အထူးသဖြင့်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့
အဲဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ မရရှိနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Rights of Access to Information နဲ့အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေ၊အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေတို့ အားပြိုင်မှု၊ အငြင်းပွါးမှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ။ဒီမိုကရေစီအရင့်အမာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတောင် သတင်းအချက်အလက်
ရယူပိုင်ခွင့်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအကြား အငြင်းပွါးမှု၊ ကြားနာမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာကို ကြားသိနေရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလို စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ခုလိုအချိန်မှာတော့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့်တွေ လိုအခွင့်အရေးတွေ ရဖို့ဘယ်လိုမှ မမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
သတငျး အခကျြအလကျရယူပိုငျခှငျ့နဲ့ နိုငျငံတျောလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒေ
ပွညျသှေးနိုငျ အပတျစဉျ တငျဆကျနတေဲ့ ကမ်ဘာ့မွနျမာ့ သတငျးမီဒီယာမွငျကှငျးကို ကွညျ့ရှုနားဆငျဖို့ အခြိနျရောကျပါပွီ။ မွနျမာနိုငျငံမှာစဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ သတငျး အခကျြအလကျရယူပိုငျခှငျ့ ဆိတျသုဉျးနတောနဲ့ပတျသကျလို့ သုံးသပျဆှေးနှေးထားပွီး မအငျကွငျးနိုငျက ကူညီတငျဆကျထားပါတယျ။
အာဏာသိမျးစဈကောငျစီလကျထကျ မွနျမာနိုငျငံတှငျးမှာ သတငျးမီဒီယာသမားတှေ သတငျးရယူနိုငျဖို့ပိုခကျခဲလာသလို သတငျးသမားတှအေတှကျ အန်တရာယျလညျး ပိုမြားလာတယျဆိုတာကတော့အထူးပွောဖို့ လိုမယျမထငျပါဘူး။ဖဖေျောဝါရီလ(၁)ရကျ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးသတငျးမီဒီယာသမား ၁၂၀ ကြျော ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာ တခြို့ကို ပွနျလှတျပေးခဲ့ပမေယျလို့ အခုအခြိနျထိ သတငျးမီဒီယာသမား ၄၀ ခနျ့ ကို ဖမျးဆီးအကဉျြးခထြားဆဲပါ။ ဒါကိုကွညျ့ရငျ သတငျးမီဒီယာသမားတှအေတှကျ ဘယျလောကျခကျခဲပွီး အန်တရာယျကွီးတယျဆိုတာ ထငျရှားပါတယျ။ လောလောဆယျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး သတငျးသမားတှေ၊ သတငျးဌာနတှေ ဘယျလိုအခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျဆိုတာကိုတော့ စဈတပျက အာဏာမသိမျးခငျအထိ မီဒီယာကောငျစီမှာ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ဦးမွငျ့ကြျောက အခုလို ပွောပါတယျ။
" ပွညျတှငျးမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ သတငျးထောကျတှရေဲ့ နံပါတျ(၁) အခကျအခဲက ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးရေးပေါ့။ သတငျးထောကျအလုပျက အဖမျးခံရနိုငျတယျဆိုတဲ့ အနအေထားက အားလုံးအတှကျ ဖွဈနတေယျ။ ဒီလိုအနအေထားမှာ သတငျးထောကျအလုပျကို ဆကျလုပျမလား၊ စှနျ့လှတျမလားပေါ့။ စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျမှာ သတငျးထောကျတိုငျးကို မေးတယျ။ တခြို့လညျး သတငျးထောကျအလုပျကိုစှနျ့လှတျလိုကျကွတယျ။ တခြို့လညျး ဆကျလုပျကွတယျ။ အဲလို ဆကျလုပျကွရငျ ဘယျမှာလုပျတယျဆိုတာအသိခံလို့ မရဘူး။ ကိုယျမေးရမယျ့ သတငျး Source တှကေ ကိုယျဘယျဌာနမှာ၊ ဘယျသတငျးလုပျတယျဆိုတာ သိသှားရငျ အန်တရာယျကရြောကျနိုငျတဲ့အတှကျ သတငျး Source တှကေို ရှေးခယျြပွီး မေးရတယျ။ ကိုယျ့အိမျမှာ ကိုယျနလေို့လညျး မရဘူး။ တခွားမှာ ပုနျးရှောငျနရေတဲ့သဘောရှိတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ သတငျးအလုပျ လုပျနတေဲ့သူတိုငျး လစာရကွတာ မဟုတျဘူး။ သတငျးဌာနတှေ ဝငျငှေ မရှိကွတော့ဘူး။ အခြို့သတငျးဌာနတှေ၊အှနျလိုငျးသတငျးဌာနတှဟော စတေနာ့ဝနျထမျးလုပျနကွေရတဲ့သူတှေ အမြားကွီး။အန်တရာယျရှိတယျ။ လစာလညျးမရဘူးဆိုတဲ့ အခကျအခဲ ရှိတယျ။"
ဟုတျပါတယျ။ သတငျးသမားအမြားစုဟာ ပုံမှနျဝငျငှေ မရကွတဲ့အပွငျ ကွီးမားတဲ့အန်တရာယျနဲ့ လညျး ရငျဆိုငျနကွေရတာပါ။ ဒါ့အပွငျ သတငျးဌာနတှဟောလညျး တရားဝငျရပျတညျဖို့ ခကျခဲလာသလို ဝငျငှအေရလညျး
ရပျတညျဖို့ မလှယျတဲ့အခွအေနပေါ။ အထူးသဖွငျ့ လှတျလပျပွီး အမှီအခိုကငျးတဲ့ သတငျးဌာနတှနေဲ့ သတငျးသမားတှဟော အခွအေနမှေနျ၊ သတငျးအမှနျတှေ တငျပွနိုငျဖို့အတှကျ မွအေောကျတဈပိုငျးပုံစံနဲ့ရပျတညျလှုပျရှားနကွေရတာပါ။ နညျးပညာအကူအညီနဲ့ Citizen Journalist (CJ)လို့ ချေါတဲ
နိုငျငံသားသတငျးထောကျတှကွေောငျ့သာ ပွညျသူလူထုထံကို သတငျးတှအေဆကျမပွတျပေးပို့နနေိုငျကွတာပါ။
ဒီနရောမှာ အလဉျြးသငျ့လို့ သတငျးရယူပိုငျခှငျ့ Rights of Access to Information အကွောငျးကိုအနညျးငယျ တငျပွလိုပါတယျ။ Right to Information (RTI)လို့လညျးသုံးလရှေိ့ပါတယျ။ယဘေုယအြားဖွငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ ရရှိပိုငျခှငျ့ဆိုတာအစိုးရအဖှဲ့အစညျး၊ဌာနဆိုငျရာတှကေ ထိနျးသိမျးထားတဲ့ အခကျြအလကျမြား(ဥပဒအေရ ခွှငျးခကျြအဖွဈ သတျမှတျထားသော သတငျးအခကျြအလကျမြားမှအပ) ကို အမြားပွညျသူက တောငျးခံရယူပိုငျခှငျ့၊သိရှိပိုငျခှငျ့ကို ဆိုလိုခွငျး ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတကာမှာတော့ သတငျးအခကျြအလကျရယူပိုငျခှငျ့ကို အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးတဈရပျအဖွဈလညျး အသိအမှတျပွုထားကွပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံတှမှောတော့ သတငျးအခကျြအလကျရယူပိုငျခှငျ့ကို သီးခွားဥပဒပွေဋ်ဌာနျးပွီးသျောလညျးကောငျး၊ အခွခေံဥပဒမှောထညျ့သှ ငျးပွဋ်ဌာနျး ပွီးတော့သျော လညျးကောငျး အာမခံခကျြပေးထားလေ့
ရှိပါတယျ။ သတငျးရယူပိုငျခှငျ့ ဥပဒကေို လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး (၂၅၀)ကတညျးက ဆှီဒငျနိုငျငံမှာ စတငျပွဋ်ဌာနျးခဲ့တာပါ။ အခုလကျရှိအခြိနျမှာ နိုငျငံပေါငျး (၁၁၀)ကြျောမှာ သတငျးရယူပိုငျခှငျ့ ဥပဒကေို ပွဋ်ဌာနျးထားကွပါပွီ။
သတငျးရယူပိုငျခှငျ့ဟာ အရေးကွီးသလား။ သတငျးအခကျြအလကျ ရယူပိုငျခှငျ့ဥပဒကေို ဘာလို့ ပွဋ်ဌာနျးဖို့ လိုအပျတာလဲဆိုတော့ RTI Law ပွဋ်ဌာနျးနိုငျရငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ပိုမိုရှိလာပွီး အဂတိလိုကျစားမှုတှကေိုထိရောကျစှာ လြှော့ခနြိုငျသလို၊ပွညျသူတှအေနနေဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ သိရှိလာတာကွောငျ့ အစိုးရရဲ့
ဆုံးဖွတျခကျြတှေ၊ မူဝါဒရေးရာတှမှော ပိုမိုပူးပေါငျးပါဝငျလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျလူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှလေညျး လြော့နညျးလာနိုငျပွီးတော့ အစိုးရတှအေနနေဲ့လညျး တာဝနျယူမှု၊ တာဝနျခံမှုတှေ ပိုမိုကောငျးမှနျလာနိုငျစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလို အကြိုးကြေးဇူးတှေ ဖွဈထှနျးနိုငျတဲ့ RTI Law မွနျမာနိုငျငံမှာတော့
ပွဋ်ဌာနျးနိုငျခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလကျထကျမှာ RTI Law ပျေါပေါကျဖို့ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာနဦးဆောငျကွိုးပမျးခဲ့တာ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့မူကွမျး(Draft)အဆငျ့သာရောကျရှိခဲ့ပွီး ဥပဒတေဈရပျ ပွဋ်ဌာနျးနိုငျတဲ့အဆငျ့အထိတော့ မရောကျရှိခဲ့ပါဘူး။
မွနျမာနိုငျငံမှာ RTI Law မရှိသေးတဲ့အပွငျ အလှနျပွငျးထနျတငျးကပျြတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြအကျဥပဒေ(Burma Official Secret Act )ကို ကငျြ့သုံးနတောတှရေ့ပါတယျ။ ၁၉၂၃ ခုနှဈ၊အိန်ဒိယအကျဥပဒအေမှတျ ၁၉ လို့ လညျးချေါပါတယျ။၁၉၂၃ ခုနှဈ၊ ဧပွီလ ၂ ရကျနကေ့ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၉၈ နှဈက ဗွတိသြှကိုလိုနီဘဝက ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ဥပဒပေါ။ ဒီဥပဒနေဲ့အတျောဆငျတူတဲ့ဥပဒကေိုဗွိတိသြှကိုလိုနီဖွဈခဲ့ကွတဲ့ သွစတေးလြ၊ အိန်ဒိယ၊ မလေးရှားနဲ့ စငျကာပူတို့မှာလညျး ပွဋ်ဌာနျးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီနိုငျငံတှမှော ဥပဒကေို ပွငျဆငျခဲ့ကွတဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံမှာလောကျ ပွငျးထနျတငျးကပျြခွငျး မရှိပါဘူး။ သွစတေးလနြဲ့ စငျကာပူတို့မှာ မူလဥပဒကေို အတျောလေး ပွငျဆငျအသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။အိမျနီးခငျြး အန်ဒိယနိုငျငံမှာတော့ ၁၉၉၀ ကြျောကာလတှမှော RTI Lawပျေါပေါကျလာတဲ့အတှကျ အစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒကေို ပွငျဆငျပွဋ်ဌာနျးခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒလေို့ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ၁၉၂၃ ခုနှဈ၊ အိန်ဒိယအကျဥပဒအေမှတျ ၁၉ ကို စတငျပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ဥပဒရေဲ့ မူလရညျရှယျခကျြဟာ သူလြှို(Spy)တှအေတှကျ ရညျရှယျပွဋ်ဌာနျးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယျ။
အဲဒီလို ရညျရှယျပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ ဥပဒကေို မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ သတငျးသမားတှကေိုတရားစှဲဆိုအပွဈပေးတဲ့အခါမှာ သုံးစှဲသလို၊ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတှကေိုလညျး ပဈမှတျထားသုံးစှဲနတောမြိုး တှရေ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ စဈတပျက ကြူးလှနျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောမွို့နယျ၊ အငျးဒငျရှာလူသတျမှုဖွဈစဉျကို ဖျောထုတျဖို့ ကွိုးစားတဲ့ သတငျးထောကျ ကိုဝလုံး နဲ့ ကိုကြျောစိုးဦးတို့ကို အစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒနေဲ့ ဖမျးဆီးတရားစှဲဆိုပွဈဒဏျ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။အဲဒီလိုပါပဲ၊ အခုလောလောဆယျမှာလညျး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သူ့ရဲ့စီးပှါးရေးအကွံပေး သွစတေးလနြိုငျငံသားရှောငျတာနယျ တို့ကိုလညျးမွနျမာနိုငျငံအစိုးရလြှို့ဝှကျခကျြဥပဒနေဲ့ တရားစှဲဆိုထားပါတယျ။ ဒီလို ၁၉၂၃ ခုနှဈက ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ခတျေမမီတော့တဲ့ ပွငျးထနျ တငျးကပျြလှနျးတဲ့ ဥပဒကေို ပွငျဆငျဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။ နိုငျငံတကာမှာတော့လြှို့ဝှကျခကျြဥပဒတှေဟော Freedom of Expression လို့ချေါတဲ့ လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့နဲ့သတငျးအခကျြအလကျရယူပိုငျခှငျ့ RTI ဥပဒတှေကွေောငျ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေးဥပဒတှေရှေိပမေဲ့ပွငျးထနျ တငျးကပျြလှနျးတဲ့ အနအေထား မရှိပါဘူး။အခွခေံလူ့အခှငျ့အရေးတှကေို လေးစားလိုကျနာတဲ့၊ဒီမိုကရစေီကငျြ့သုံးတဲ့ နိုငျငံတှမှောတော့ သတငျးရယူပိုငျခှငျ့၊ သတငျးအခကျြအလကျသိပိုငျခှငျ့တှကေို အလေးထားကွပမေဲ့ အာဏာရှငျအုပျစိုးတဲ့နိုငျငံတှေ၊ အထူးသဖွငျ့အာဏာရှငျ အုပျခြုပျတဲ့နိုငျငံတှမှောတော့ အဲဒီလိုအခှငျ့အရေးတှေ မရရှိနိုငျကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ Rights of Access to Information နဲ့အစိုးရရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြဥပဒေ၊အမြိုးသားလုံခွုံရေးဥပဒတေို့ အားပွိုငျမှု၊ အငွငျးပှါးမှုတှကေတော့ဆကျရှိနဦေးမှာပါ။ဒီမိုကရစေီအရငျ့အမာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာတောငျ သတငျးအခကျြအလကျ
ရယူပိုငျခှငျ့နဲ့ အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှအေကွား အငွငျးပှါးမှု၊ ကွားနာမှုတှေ ပွုလုပျနတောကို ကွားသိနရေပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံလို စဈတပျက အာဏာသိမျးထားတဲ့ ခုလိုအခြိနျမှာတော့သတငျးရယူပိုငျခှငျ့၊ သတငျးအခကျြအလကျသိပိုငျခှငျ့တှေ လိုအခှငျ့အရေးတှေ ရဖို့ဘယျလိုမှ မမြှျောလငျ့နိုငျကွောငျးပါခငျဗြား။